हवाइजहाजको पाङग्रामा बसेर ५ हजार माइल यात्रा गर्दा पनि १६ वर्षका किशोर जीवितै ! भिडियो भयो भाइरल – Enepali Samchar
February 14, 2021 adminLeaveaComment on हवाइजहाजको पाङग्रामा बसेर ५ हजार माइल यात्रा गर्दा पनि १६ वर्षका किशोर जीवितै ! भिडियो भयो भाइरल
e nepalisamchaar /काठमाडौं। हवाइजहाजको तल्लो भागमा ल्याण्डिङ गियरमा बसेर १६ वर्षका एक किशोरले ५ हजार माइलको यात्रा गरेका छन् । लण्डनबाट उडेको जहाज नेदरल्याण्डको होल्याण्ड पुगेपछि मात्रै एयरपोर्ट स्टाफले ल्याण्डिङ गियरमा मानिस भएको थाहा पाएका थिए । करिब १९ हजार फिटको उचाइमा निकै चिसोमा रहेका कारण ती किहोर हाइपोथर्मियाका शिकार भएका थिए तर आश्चर्यजनक रुपमा जीवित थिए ।
कुलमान घिसिङले होइन म आफै लोडसेडिङ हटाएको हुम: ओली
अब छोरा या छोरी के जन्मिने?थाहा पाउँनुहोस्